अनशनको तेस्रो दिनमै खस्कियो डा. केसीको स्वास्थ्य – Health Post Nepal
अनशनको तेस्रो दिनमै खस्कियो डा. केसीको स्वास्थ्य
२०७६ कार्तिक २० गते १४:३६
डडेल्धुरा सदरमुकाममा सोमबारदेखि १७औँ चरणको अनशन सुरु गरेका चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यअवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । डडेल्धुरा अस्पतालनजिकै निर्मल क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको घरको तेस्रो तलाको एउटा कोठामा अनशन बसिरहेका केसीको चिसोका कारण स्वास्थ्यअवस्था कमजोर बन्दै गएको हो । विगतमा २७ दिनसम्म पनि अनशन बसेका डा. केसीको यसपटक भने तेस्रो दिन नै स्वास्थ्यअवस्था खस्किएको हो ।
डा. केसीको स्वास्थ्य चिसोका कारण बिग्रिन थालेको डडेल्धुरा अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार केसीको ब्लडप्रेसर घट्नुका सथै अनियमितसमेत भइरहेको छ । बुधबार बिहान मात्रै उनको दुईपटक स्वास्थ्यजाँच गरिएको थियो । उनको ब्लडप्रेसर कहिले ९०/६० त कहिले ६०/४० हुने भइरहेको छ ।
‘हिजोसम्म उहाँको ब्लड प्रेसर ठिक–ठिकै थियो, आज ९०/६० मा झरेको छ,’ निमित्त मेसु डा. कँडेलले भने, ‘उहाँले आफू कमजोर भएको महसुस गर्नुभएको छ । हिजोजस्तो उहाँमा जाँगर छैन ।’ चिसोका कारण डा. केसीको स्वास्थ्यमा झन् प्रतिकूल असर पर्न सक्ने जानकारी उनले दिए ।
बुधबार दिउँसोसम्म डडेल्धुराको अधिकतम तापक्रम २१ दशमलव २ डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापक्रम ९ दशमलव ३ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । केसी अनशन बसिरहेको क्षेत्रमा घाम नै लाग्दैन । डडेल्धुरा अस्पतालमा चिकित्सक कम हुँदा डा. केसीको नियमित जाँचमा समेत समस्या भइरहेको निमित्त मेसु डा. कँडेलको भनाइ छ । दिनप्रतिदिन डा. केसीको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गए डडेल्धुरा अस्पतालमा सार्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।
डा. केसीले सोमबार बेलुकी ५ बजेदेखि अनशन थालेका थिए । यसअघि उनले पत्रकारसम्मेलनमार्फत आफ्ना सातबुँदे मागबारे जानकारी गराएका थिए । उनको माग मूलतः आफूसँग विगतको सत्याग्रहका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ ।
यस्ता छन् १७औँ सत्याग्रहका माग